Cala Moraig, waa mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Costa Blanca | Wararka Safarka
Luis Martinez | | Espana, Xeebaha
Cala Moraig waa mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Costa Blanca. Waxay ku taal gobolka Alicante ee Sare Marina iyo, si gaar ah, ee Poble Nou de Benitachell, kalabar Jávea iyo Moraira.
Qarsoodi yar oo ah ciid cad iyo biyo saafi ah ayaa ka muuqda gadaasha Puig de la Llorença massif, taas oo ku dhacda xeebta iyada oo la soo rogayo buuro ilaa boqol mitir oo dhaadheer kuwaas oo ay ku jiraan, si hufan, xeebo yaryar. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Cala Moraig, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato aqrinta.
1 Waxyaabaha lagu sameeyo Cala Moraig
1.2 Wadooyinka socodka
2 Sida loo tago Cala Moraig
3 Hareeraha Cala Moraig
Waxyaabaha lagu sameeyo Cala Moraig
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka ogaato Cala Moraig ayaa ah in geeska bidix uu yahay dhaqan qaawan. Laakiin, ka sii muhiimsan waa waxyaabaha aad sameyn karto haddii aad booqato xeebtaan quruxda badan.
Aaggu waa ku habboon yahay inaad ku tababarto quusin iyo quusid. Dhagaxyada dhaadheer ee ku dhaca xeebta waxay ka samaysan yihiin qaab dhismeed dhagax weyn oo biyo ah oo ay ku nool yihiin noocyo kala duwan.
Meelahaas dhagaxyada leh, soo jiidashada ugu weyn ee Cala Moraig ayaa taagan. Waxay ku saabsan tahay wicitaanka Cova dels Arcs, oo leh godad dusha sare iyo biyaha hoostooda. Waxay ahayd wax soo saarka nidaamka kaastarada karst ee ay ku mareyso badda dhagaxa qeybtiisa wanaagsanna waxaa hareeyay 6000 bilyan sano ka hor.
Waxaa la ogyahay inay bini aadamku ogaayeen tan iyo markii ay soo degeen dadkii ugu horeeyey deegaanka. Markii dambe, waxay u noqotay magangalyo badmaaxiinta, in kasta oo dib loo ogaan doono markii la diyaarinayo shaqooyinka wadada isku xirta Poble Nou de Benitachell iyo magaalooyin aagga.
Bannaanka Cova dels Arcs ayaa ku siinaya qorraxda qorraxda cajiibka ah. Iyo, gudaha, qaybta ugu wanaagsan ee loo yaqaan godka ayaa loo yaqaan Qolka Immersionists, sidoo kale loo yaqaan "Window Window". Halkaas, waxaad sidoo kale ka heli kartaa qolal hoose oo waasac ah oo toos ula xiriira badda furan.
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan galin godka waa inaad qaadataa taxaddarro qaarkood. Ugu horreyntii, waa inaadan sameynin markii hirarku kacsan yahay oo ay baddu soo rogmato maxaa yeelay waxay kugu sababi kartaa inaad ku dhufato dhagaxyada. Sidoo kale iyo tan labaad, dusha sare ee daloolku waa sibiibix mana adka in la dhaco. Laakiin, si kastaba xaalku ha ahaadee, waa a dabeecadda yaabkeeda kaas oo sidoo kale loo aqoonsan yahay inuu yahay biyo-mareenka ugu dheer ee dhulka hoostiisa ka baxa ee dhammaan Spain.
Dhinaca kale, laga bilaabo Cala Moraig waxaa jira dhowr waddo oo lugeynaya iyo baaskiillo maraya bartamaha aan soo sheegnay ee Puig de la Llorença, oo sidoo kale loo yaqaan Shirwaynaha Qorraxda. Dhex istaag iyaga dhexdooda midka mideeya Abiar iyo Calistros, taas oo dhex marta dhul-beereedka beerashada geedka canabka ah waxayna ku tusaysaa dhismooyin dhaqameed gobolka loo yaqaan riurau, oo ah meeshii canabka lagu hayn jiray. Waxay ku egtahay aagga madadaalada ee magaalada ugu horreysa ee aan soo sheegnay.
Jidkan, oo aad labadaba lug iyo baaskiil ku samayn karto, waad leedahay tii Penya-Segats, Soo jiidashadiisa ugu weyni ay ku jirto aragtiyada ay kaa siiso godadka ku yaal xeebta. Iyo si siman, tii khaladka Moraig, kaas oo leh qiime heer sare ah. Laakiin dariiqa sida aadka ah kaaga yaabin doona waa wicitaanka Wadada Cliffs, kaas oo raacaya waddada SL-CV 50, oo la calaamadeeyay oo leh aragtiyo badan.
Sida loo tago Cala Moraig
Sida kaliya ee lagu tago Cala Moraig waa wadada. Waa inaad u tagtaa CV-737 oo qaado leexashada u horseedaya Cumbre del Sol magaalaynta. Markaad tan ka gudubto, waxaad ka heli doontaa meel gawaarida la dhigto oo ku taal qaybta sare ee qoob-ka-ciyaarka halkaas oo ay tahay inaad dhigato gaarigaaga oo aad inta kale ee lugta ah ku sameyso. Tani ma aha mid aad u dheer, in kastoo lagu dhawaaqo.
Hareeraha Cala Moraig
Dhinaca kale, maalin kadib xeebta Cala Moraig, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad ogaato hareeraha. The Sare Marina Alicante waxay leedahay magaalooyin aad u qurux badan oo ku habboon booqashadaada. Waxaan kuu tusaynaa sida ugu dhow ee loo xiro.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ka sheegno magaaladan ayaa ah, in degmadeeda ay ku dhex leeyihiin, waxaad leedahay coves qurux badan oo kale sida laga soo qaaday baaritaanka y by Llebeig. Laakiin sidoo kale waxay ku siineysaa taalooyin xiiso leh. Kuwaas waxaa ka mid ah kaniisada Santa Maria Magdalena, oo lagu dhisay qarnigii XNUMXaad qaabka baroque. Intaa waxaa dheer, waxaan kugula talineynaa inaad aragto Jaime Llobell Oratory, oo lagu dhisay XIX.
Laga soo bilaabo isla waqtigaas ayaa ah Hoolka Magaalada oo aad uga weyn Portalet, kaas oo ka mid ahaa irrdihii derbiyadii qarniyadii dhexe oo maantana siinaya marinka fagaaraha kaniisadda.
Aad ugu dhow Cala Moraig sidoo kale waa magaaladan yar oo ay ku nool yihiin XNUMX oo qof oo leh deked qurux badan. Marka laga hadlayo taallooyinkeeda, qalin, kaas oo ahaa dhufeys ilaalin xeebeed si looga ilaaliyo aagga weerarada burcad-badeedda.
Magaaladan yari waa mid ka mid ah kuwa loogu taliyay qaybtan ka mid ah gobolka Alicante. Waxaad la yaabi doontaa tirada taallooyinka ay leedahay. Iyaga ka mid ah, set ee guryo waaweyn iyo qasriyo oo u adeegta xarun ahaan xarumaha Jaamacadda Alicante.
Waxay sidoo kale iftiiminayaan kaniisadda Aabayaasha Franciscan, laga bilaabo 1645; ah Qasriga Torres-Orduña, maanta guriga dhaqanka; ah Kaniisadda Neo-Gothic ee rimidda nadiifka ah iyo, wixii ka sarreeya, Jeex, oo ku taariikhaysan qarnigii XNUMX-aad waana dhismaha ugu faca weyn magaalada.
Suuqa kalluunka ee Benisa
Waa magaalada ugu muhiimsan aagga waxaana ilaaliya Montgó massif, agagaarkaaga oo aad ku leedahay jardiin qurux badan oo dabiici ah. Qaybta dambe, waad ku dhowaan kartaa Cape San Antonio, taas, oo leh qulqulayadeeda quruxda badan, waxay ku siineysaa aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan Costa Blanca.
Marka laga hadlayo taallooyinka Jávea, way ka sarreeysaa dhammaan kaniisadda San Bartolomé, oo la dhisay qarnigii 1931aad. Wuxuu isku daraa astaamaha qalcadda qorshaheeda afargeesle ah iyo qalcado adag oo leh miyir diineed oo macbud ah. Intaa waxaa dheer, munaaraddeeda dawankeeda ayaa laga arki karaa meelo badan oo gobolka ka mid ah. Laga soo bilaabo XNUMX waxay ahayd Taallo Qaran oo Faneed.
Ku kaniisadda Our Lady of Loreto, taas oo ku taal dekedda oo saqafkeeduna u ekaysiinayo qarka markabka. Dhinaca kale, haddii aad tagto Cape San Antonio, waxaad ka heli doontaa keniisad ee Virgin ee Malaa'igta iyo dhowr munaarado fiirin taasi oo xakameysay imaatinka burcad-badeedda.
Gabagabadii, Cala Moraig Waa mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Costa Blanca oo dhan. Waxay ku siineysaa yaabab sida Cova dels Arcs. Laakiin sidoo kale magaalooyinka aagga ayaa mudan inaad booqato. Miyaadan rabin inaad ogaato geeskaan Gobolka Alicante?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Cala Moraig
Sida loogu labisto Morocco